Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị njem nleta Czech nọ na họtel dị ọnụ ala na Croatia
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Croatia na -agbasa ozi ọma • omenala • Akụkọ na -agbasa na Czechia • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A na-ahụ ndị njem nleta Czech na Croatia dị ka ndị dị ọnụ ala ma a na-ebido mgbasa ozi ịkpa ókè megide ndị njem nleta na-aga Croatia site na Czech Republic, obodo EU abụọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde ndị njem nleta dị ka ndị dị ọnụ ala na-eleta Adriatic kwa afọ dị ka Jan Papež, bụ ọnụ na-ekwuchitere Czech Association of Travel Agents na Blesk si kwuo. “Ọ bụ ihe adịghị mma inye anyị stampụ nke 'pašteta ndị njem nleta'. Ndị ọbịa Czech dị ezigbo mkpa maka ndị Croats. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde mmadụ na-abịa Adriatic kwa afọ, ”ka Jan Papež, bụ ọnụ na-ekwuchitere Czech Association of Travel Agents na Blesk kwuru.
Ọzọkwa, dị ka Papež si kwuo, ọ bụghị nanị na ha na-eji oge ọkọchị ha nọrọ n’ụlọ dị ọnụ ala. Ọ gbakwụnyere, sị, "Ọtụtụ na-aga ụlọ oriri na nkwari akụ anọ na nke nwere aha ndị ka elu." O kwusikwara ike na mgbe agha ahụ gachara na mbido 1990, mgbe ụwa enweghị mmasị na Croatia, ndị Czech bịara. ”
Papež na-aga ogologo na mgbasa ozi mpaghara, Czech na-eleta Croatia na ọnụ ọgụgụ ndị na-edekọ ọnụ n'agbanyeghị eziokwu ọnụahịa na-arị elu. ”
Na mgbakwunye n'afọ gara aga, ndị njem ụgbọ mmiri 32,763 Czech gara Croatia (ma ghọta 218,404 n'abalị). Ma ọ nwere ike ọ gaghị ekwusi ike na ha erighị pate, onye edemede dere. Ọtụtụ ndị njem nleta na Czech na-agbazite ụgbọ mmiri na saịtị ahụ, nke na-efu ihe dị ka euro 800 ruo 50,000 kwa izu.
Ma ego ole ha mefuru anaghị akwụsị ebe a. A ga-eburukwa ụgbọ mmiri na-ejigharị ejegharị. Iji maa atụ, na Split, ijigide ụgbọ mmiri sitere mita 10 ruo 20 ga-efu ihe dịka 700 ruo 1600 Kuna kwa abalị. Kuna dị ihe dịka 0.14 Euro ma ọ bụ 0.16 US Dollar.
Gbọ ala ụgbọ ala na marina na-efu euro 40 ruo 60 kwa izu, na mgbakwunye na mmiri ọhụrụ, mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik, wifi maka ịnọ abalị na marina. "Dabere na atụmatụ siri ike, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Czech na-etinye ihe ruru nde 180 nde na mba a na-akpọ anyị 'ndị njem nleta pašteta'," Blesk kwukwara.
Dabere na otu nnyocha nke Mahadum Rijeka mere n'afọ gara aga, ndị Czech na-etinye nkezi nke 390 ụbọchị kwa ụbọchị na Croatia, nke a na-esighi tụnyere ndị Britain na-emefu 915 ọnwa. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ndị njem nleta bụ ndị njem nleta ụlọ. Ha na-emefu naanị 368 kwa ụbọchị.
5,489,607 Czech abalị na Croatia site na mmefu ego, ya na ijeri 2.2 ijeri maka njem njem na njem nlegharị anya nwetara n'afọ gara aga site n'aka ndị njem nleta Czech ndị a. Mmadu nwere ike kporo profaịlụ a na-ezighi ezi.